Madaxweyne Biixi Oo Markii Ugu Horraysay Qaaday Tallaabo Midaysay Mucaarid Iyo Muxaafid-ba – somalilandtoday.com
(SLT-Hargeysa)-Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa qaaday tallaabadii ugu horraysay tan iyo markii la doortay ay si isku mid ah u soo dhaweeyaan ugu riyaaqaan shacabka Somaliland iyo taageerayaasha saddexda xisbiga ee UCID, WADDANI iyo KULMIYE.
Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi ayaa digreeto Madaxweyne gacanta dawladda dib ugu soo celiyay hanti qaran oo ay xukuumaddii hore ee Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ay shirkado gaar ah ku wareejisay.
Hantida uu gacanta dawladda dib ugu soo celiyay madaxweyne Muuse Biixi ayaa kala ah Haamaha Berbera, Amniga iyo Baarkinka Madaarka Caalamiga ah ee Cigaal.
Dad qaar ayaa u arka tallaabad u qaaday Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi mid lagu baacsanayo dad gaar ah oo ka tirsanaa xukuumaddii hore ee Madaxweyne Axmed Maxamuud Maxamuud (Siilaanyo) oo loo tuhmay inay gacanta kula jiraan meelaha uu maanta taabtay Madaxweynuhu.
Dadka baraha bulshada wax ku qora ayaa boggaadiyay tallaabadan uu qaaday Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Dadka arrinta faaqidayay ayaa wax sheegayaan inay tani tahay bilow ayna rajo fiican ka qabaan in hanti kale oo badan gacanta loo galiyay amma la siiyay dad gaar ah dib loogu soo celin doono gacanta dadweynaha.
Sidoo kale waxa dadka rajo fiican ka muujiyeen In nidaamka kootada ee suuqa (monoploy) ay xukumadu laasho sida alaabaha ( comodities) iyo adeegyada (services) ayaa bixiyaan shirkaduhu lana dhirigeliyo suuq xor ah ( free market)
Mas’uuliyiin ka tirsan saddexda xisbi qaran oo warbaahinta la hadlay ayaa iyaguna soo dhaweeyay tallaabadan.